အဘယ်မှာရှိပဲရစ်ကျော်ဟာရှုခင်းအကောင်းဆုံး Get မှ
ဥရောပ ပြင်သစ် ပဲရစ်
အဘယ်မှာရှိပဲရစ်ကျော်ဟာအကောင်းဆုံးရှုခင်း Get မှ
Getty / De Agostini C. Sappa
အဆိုပါ Hobbit နှင့်လက်စွပ် trilogy ပာ၏သခင်အပေါ်စာရေးသူ JRR Tolkien ရဲ့စာအုပ်တွေမှုတ်သွင်းကြအံ့သောငှါထူးဆန်းသောကျောက်သတ္တဝါတွေနဲ့တှေ့ဆုံများအတွက် 223 ခြေလျင် (67 မီတာ) ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်လှေကားတက်။ သူတွေဟာ 400 ခြေလှမ်းများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဤလောကသို့သငျသညျယူပါ။ ဝက်အချင်းလူသား, ဝက်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုသတ္တဝါများ, မြွေ, talons, လျှာနှင့်ခြေသည်းထူးဆန်းရောနှော၏ပုံစံအတွက် Fantastic gargoyles ပဲရစ်မြို့ကိုကျော်ထွက်ကြည့်ပါ။ Quasimodo, Notre Dame ၏ခါးကုန်းအဘိုးကြီးအတွက်ဗစ်တာဟူဂိုရဲ့နာမည်ကျော်ခေါင်းလောင်း ringer အဆိုပါ gargoyles ၏တဦးတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့် roofscape ကျော်ထွက်ရှာနေဒီနေရာမှာသူ့ကိုဖွင့်စိတ်ကူးဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
Oh, နှင့်မြစ် Seine ကျော်နှင့် Eiffel မျှော်စင်ဖို့အမြင်များအတော်လေးခမ်းနားဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ၏ထိပ် (သို့မဟုတ်ပင်2ကြိမ်မြောက်ကြမ်းပြင်) Eiffel မျှော်စင် သငျသညျအကြီးအအမြင်များနှင့်သင်အောက်က Champ က de အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်အတူမြို့ရဲ့အနောက်ဖက်အခြမ်းမှာအကောင်းတစ်ဦးကြည့်ပေးသည်။ သင်သည်တတ်နိုင်ထိပ်ကနေ, ထိုပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေ့၌, 40 မိုင် (65 ကီလိုမီတာ) များအတွက်ကြည့်ပါ။ အဆိုပါမျှော်စင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်; ကက Universal ပြပွဲများအတွက် 1889 ခုနှစ် Gustave-Alexandre Eiffel ကတည်ဆောက်ယာယီဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျတညဉျ့မှာသွားလျှင်, သင်ကိုအောက်ကပဲရစ်မှိတ်နှင့်ကခုန်၏အလင်းအိမ်တွေ့မြင်; သည်တစ်နာရီအဆိုပါမျှော်စင်ကနေအံ့မခန်းအလင်းပြပွဲရှိပါတယ်။ ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်နှင့်တကွ, Eiffel မျှော်စင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ပြင်သစ်တွင် 3rd လူကြိုက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှု ။
ဒါပေမယ့်အကွာအဝေးကနေ Eiffel မျှော်စင်၏အမြင်များနည်းတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း, ဤအလင်း၏စီးတီး၏ကြီးစွာသော icon များထဲကတစ်ခုသည်အတိုင်း, သင်မြင့်တက်, ဇာကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းပုံတစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာသေချာပါစေ။ Torcadéroဖို့မက်ထရိုကို ယူ. , Palais de Chaillot ဥယျာဉ်ကနေ Seine အနှံ့သွားလာရကြ၏။
Arc de Triomphe ကြည့်ရန်
Getty / Nikolas Moya / EyeEm
1806 တွင်နပိုလီယံပြန်တမ်း, အ Arc de Triomphe ဟာဂရန်းကြည်းတပ်၏အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်။ ဖြစ်ချင်တော့သူကနပိုလီယံကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 1836 ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သညျ။ နာမည်ကျော်မျှော်စင်ပြည်နယ်အသုဘအဘို့နှင့် Tour de ပြင်သစ်၏နောက်ဆုံးဇာတ်စင်အဖြစ်အသုံးပြုပြင်သစ်များအတွက် Focal Point သည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာထိပ်တစ်ခု 280-Step တောင်တက်မယ့်ပေမယ့် Champs-Elysees နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ကျော်လွန်ပြီးမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များအဘို့အတန်ဖိုးရှိအားထုတ်မှု။
သငျသညျပဲရစ် built ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အနည်းငယ်မိုးမျှော်တိုက်၏တဦးတည်းရဲ့ထိပ်ကနေပဲရစ်၏စိတ်ကူးအမြင်အရပါလိမ့်မယ်။ 56 ကြိမ်မြောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမြင့်မားသော 656 ပေ (210 မီတာ) မှာလေ့လာရေးကုန်းပတ်သင်သည်အောက်တွင်ပဲရစ်ပြသထားတယ်။ ဒါဟာပူးတွဲသင်မှာရှာနေတာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်အောင်သတင်းအချက်အလက်ပြားရှိပါတယ်ရဲ့။ တစ်ဦးကဖီးနှင့်တစ်ဦးခေါင်မိုးပေါ်ရှန်ပိန်ဘားနှင့်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ယူပြင်သစ်အတွက်အလျင်မြန်ဆုံးဓာတ်လှေကားရှိပါတယ်။
သင်ကပဲရစ်၏အများဆုံးအနေဖြင့်သန့်ရှင်းသော-Cœur၏ Basilica ကြည့်ပါ။ ဒါဟာနည်းနည်း 80 ကျော်မီတာမြင့်သော, အရပ်ရှည်ရှည်အဆောက်အဦသူ့ဟာသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်သင်မြို့အပေါ်မှာတစ်အလွအမြင်ပေးသည် Montmartre တောင်ကုန်းထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကသင် Eiffel မျှော်စင်အဖြစ်တက်နီးပါးမြင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ Seine မြစ်ကျော်တံတားကနေ views
Atout ပြင်သစ် / Pascal Groboval
အဲဒီမှာပဲရစ်အတွက် Seine ဖြတ်ပြီး 37 တံတားများဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်ရွေးချယ်မှုများများရရှိပါသည်။ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းမြစ်ဘဏ်များတစ်လျှောက်ရှိအပန်းဖြေလမ်းလျှောက် ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ ပဲရစ်၏ကြီးစွာသောအထင်ကရက်ဘ်ဆိုက်များအချို့သည်။
အဆိုပါပိုတငျး Neuf အကောင်းဆုံးကိုလူသိများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် New တံတား၏၎င်း၏အမည်ကိုနေသော်လည်း, အသက်အကြီးဆုံးတံတားဖြစ်ပါတယ်။ 1607 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အိမ်များကိုအခမဲ့ဖြစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးပဲရစ်တံတားက Ile de la ကိုးကား၏အနောက်ဘက်အဆုံးကိုဖြတ်ကူးခြင်း, ညာခြင်းနှင့်လက်ဝဲဘဏ်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ အဆိုပါပိုတငျး Alexandre III ကို Franco-ရုရှားဆက်ဆံရေးဟာသူတို့ရဲ့အမြင့်မှာအခြိနျမှာရုရှားနိုင်ငံ၏ Tsar ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးသောကျောက် 1896 ခုနှစ်တွင် Alexandre ရဲ့သား, က Nicholas II ကအလောင်းတော်ထားနှင့်ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲများအတွက် 1900 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာက Grand Palais နှင့်အသနားခံစာ Palais နှင့်အတူဟိုတယ် des မှားနေသောဆက်သွယ်နှင့်၎င်း၏သာမန်ထက်ရုပ်ပွားတော်, အလင်းအိမ်နှင့် nymphs အတူ Seine မြစ်တံတားအလှဆုံး၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်။
အဆိုပါ Parisian အာဏာပိုင်များကြောင့်ကြေးဝါဖြင့်အလေးချိန်ရန်, ဇွန်လ 2015 ခုနှစ်တွင်သူတို့အားလုံးကိုဖယ်ရှားသည်အထိပိုတငျး des ဝိဇ္ဇာတံတား၎င်း၏မေတ္တာတော်ကိုသော့ခလောက်ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပဲရစ် Jeu က de Paume အမျိုးသားပြခန်း
ပဲရစ်ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. ခရီးသွားမှဘယ်လိုနေသလဲ?
ပဲရစ် Hygge ခံစားကြည့်ပါရန် 8 Coziest နည်းလမ်းများ
ပဲရစ်အတွက်လှည့်လည် Montparnasse ဖို့ကိုလမ်းညွှန်: အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ပြကွက်များသည်
Chateau d'Esclimont ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကိုယ်ရေးဖိုင်ခုနှစ်တွင်: စင်တာ Pompidou မှာက Le ဇော့စားသောက်ဆိုင်
အမေရိကန်ရေတပ်အကယ်ဒမီကျောင်းပရဝုဏ်ဓာတ်ပုံများ - Annapolis တွင်, MD
အဆိုပါ Champs-Elysees အိမ်နီးချင်းဖို့ကိုလမ်းညွှန်
ကော်လိုရာဒိုရဲ့အကောင်းဆုံး Apres နှင်းလျှောစီးအစွန်းအကွက်
Los Angeles မြို့မိုးလေဝသ
အဆိုပါအများစုမှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်-Friendly Spa မ်ား
2018 ၏ 8 အကောင်းဆုံး Providence ဟိုတယ်
Madeira ၏ကျွန်းသို့သွားရန်9အကြောင်းရင်းများ